Stellar (XLM) Gained 12% in 2 Days Yet Appears Bearish | CoinGenius Hosts Virtual Crypto Event
We’re excited @NkanyeziKubheka put in $550,000 as a strategic investment toward SatoshiPay’s X-boarder payment technology. Transferring money to anyone, anywhere without excessive fees – empowers the globally underserved in unprecedented ways! 👍 https://t.co/u9NQ4MaoCJ
Ukuhlaziywa kwentengo ye-Stellar
It was just through intraday strengthening in price that the coin regained the lost support from MA200 while lacks medium-term support from MA50 at $0.0903. As the Intengo ye-XLM regained the lost momentum, the trend hit the lower band, but with a gradual rise in price above $0.070, it has gained over 12% in 2 days from the daily bottom of $0.066.
The MACD indicator reflects an intersection yet the flattish movement of the MACD line and signal line on the daily chart. The RSI is 41.44 and holds a strong inclination towards the support due to no massive gain in Stellar price over the past 30 days.
Izihloko ezihlobene:AppbearishblockchainImalicryptoImakethe ye-CryptocryptocurrencyI-EdgeeToroIzimalinge-intradayUkubekaInvestmentezitshaliweJULANILumensI-LunarCRUSHMACDMarketMediamobileimaliONEUkubambisanalokukhokhaInaniumvuzoSocialsocial mediaI-StellarI-Stellar LumensUbuchwepheshetopUkuhwebaUkuhwebaBukamkhubaI-XLMI-XLM / USD
Ukwephula: Ama-DeFi Protocol Harvest Finance Attack Okuqondiwe Amachibi Wokushona
Umhlaziyi Uchaza Ukuthi Kungani Izingozi ZeBitcoin Zishayisa ngo- $ 2K “Ezinsukwini Ezimbalwa”
Kusukela lapho abakwaFacebook bememezele izinhlelo zabo zokwenza imali yokukhokha yedijithali ebizwa ngeLibra, osomabhange abaphakathi bazamile ukuyiphikisa ngokusungula okwabo.
Ngenkathi iLibra ibhekene nezinkinga zokulawula, i-BIS umbiko iveze ukuthi ngaphezu kwe-80% yamabhange amakhulu emhlabeni manje athuthukisa imali yasebhange emaphakathi yedijithali (i-CBDC).
Umqondo nenhloso ye-CBDC kwehluke ngokuyisisekelo kunakho konke iBitcoin emele khona. Ngakho-ke, umphakathi ubulokhu ucabanga ngemiphumela engaba khona nge-cryptocurrency eyinhloko. Ngabe imali ephethwe nguhulumeni izolimaza indima ye-BTC emhlabeni oku-inthanethi, noma izomane ihlele isiteji sokungena kwayo okuhle?
Isimo A: Ama-CBDC Akulungile Nge-Bitcoin
Ama-CBDC azomela izikweletu zemali esizisebenzisa nsuku zonke, kepha, njengoba igama liphakamisa, zizoba ngedijithali kuphela. Kusekhona izinto eziningi ezingaziwa maqondana nentuthuko yabo. Yiliphi izwe elizoba kuqala, bazosebenzisa buphi ubuchwepheshe, ngabe ama-CBDC azoba yimali ekhokhelwa ukudayiswa noma cha?
Le mibuzo ekugcineni izothola izimpendulo zayo. Kodwa-ke, abantu abaningi besaba ukuthi ukwethulwa kwe-CBDC kuzonikeza ohulumeni ukulawula okuphelele ukulandelela, ukuvumela, noma ukumisa yonke imisebenzi ekhokhwayo yesikhathi esizayo.
Iziphathimandla zikuthethelele lokhu kugadwa okungaba khona njalo ngokuthi zizokwazi ukunciphisa futhi zize ziqede nezinto ezingekho emthethweni, njengokukhwabanisa imali.
Ngakolunye uhlangothi, sekuvele ukukhathazeka emphakathini ukuthi ukwethulwa okungenakugwemeka kwe-CBDC kuzolimaza imboni kanye nommeleli wayo owaziwa kakhulu - iBitcoin.
Isikhulu esiphezulu seBinance uChangpeng Zhao (CZ) muva nje kwabikezelwa ukuthi i-CBDC eklanywe kahle "ingaba usongo" kwi-cryptocurrency yokuqala ngqa. Uqhakambise ukuthi eziningi zezimali ezinjalo zizogxila kakhulu futhi ngeke zinikeze inkululeko efanayo ne-Bitcoin.
Ngenxa yalokho, ohulumeni bomhlaba bazoqhubekisela phambili okwabo ngokwengeziwe ngenkathi bethambekele ekwehliseni indima yento enikezwe amandla njenge-BTC.
Iphepha elimhlophe likaBitcoin kuchazwe it "njengogesi peer-to-peer uhlelo lwemali." Kodwa-ke, ukuba nokuncintisana okuningi okuxhaswa yimibuso emikhulu yomhlaba kunganciphisa iqhaza layo. Kungaba yingozi ikakhulukazi uma ama-CBDC evumela ukuthengiselana okushibhile nokusheshayo kune-BTC.
Ngokwengeziwe, inani lazo ngeke lishintshe ngokufana neleBitcoin. Lesi kungaba esinye isizathu sokuthi kungani abantu bekhetha ukuthumela noma ukuthola imali engeke ilahle noma yiliphi inani lapho umsebenzi usuphelile.
Isimo B: Ama-CBDC Azosiza I-Bitcoin Njengethuluzi Lokukhokha
Ngakolunye uhlangothi, kunomlando wokuthi lapho ama-CBDC efika, angavula kuphela umnyango weBitcoin. Umphathi omkhulu we-cryptocurrency Investment Grayscale muva nje waphikisana ukuthi lapho yethulwa, ama-CBDC angahle “akhulise indima kaBitcoin emnothweni wedijithali womhlaba jikelele.”
Lokhu kungenxa yokuthi abantu kuzofanele bajwayelane nengqalasizinda yokukhokha yedijithali, ebingakadingeki kuze kube manje. Ngokuzifundisa ngalolu daba, abantu bazokwazi ukuthola umehluko omkhulu phakathi kweBitcoin kanye nemali ephethwe nguhulumeni edijithali.
"I-Bitcoin ibaluleke hhayi ngoba yidijithali, kodwa ngenxa yokuthi iBitcoin iyindlala, ayithikamezi, imali engathandeki evulekele noma ngubani ukuyisebenzisa."
Isimo C: Ama-CBDC Ukusiza i-BTC Njengesitolo Sevelu
Uma umuntu ecabanga ukuthi isimo sokuqala siyagcwaliseka futhi iBitcoin iyeka ukusebenza njengohlelo lwemali olwenziwa ngoontanga, lokho akusho ukuthi ngeke kusabaluleka emphakathini.
Esikhundleni sokusetshenziselwa ukudlulisa izimali zisuka kwelinye ikheli ziye kwelinye, i-BTC ingaba yilokho abanye abaningi abaphikisana ngakho iminyaka - isitolo senani.
Ngemuva kwakho konke, iBitcoin yabelana ngokufana okuningana nesitolo samanani esamukelwa kakhulu - igolide, njengokushoda. Ukusebenza kwamanani wezimpahla ezimbili nakho kuyefana muva nje. Inkinga yezezimali ye-COVID-19 kuphela isheshisiwe ukuhlangana kwabo okwandisiwe.
Ngisho noSihlalo wase-US Federal Reserve uJerome Powell kuqhathaniswa lokhu okubili futhi kuphawulwe ukuthi zombili ziyindlela yokuqagela yesitolo senani.
Omunye okholelwa kulo mqondo yingalo ye-Fidelity's cryptocurrency - Fidelity Digital Asset. Kwi umbiko ihlanganiswe ekuqaleni konyaka, inkampani ebizwa ngeBitcoin "isitolo esikhuthazayo senani."
Ngakho-ke, uma i-BTC izokwehluleka ngempela njengomthombo wokukhokha online ngenxa yama-CBDC, ukusetha okuyingqayizivele kungayidlulisela kwenye, mhlawumbe nendima ebaluleke kakhulu emhlabeni wanamuhla (wedijithali).